राजनिति – Page2– Everest Pati
कुलमान घिसिङको होइन ; रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धीको नियुक्त भएको…
काठमाण्डौं – चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपाभित्र चर्किरहेको सत्तासंघर्ष उत्कर्सको समयमा नेकपा शीर्षनेताहरुसँग भेट गरिन्। उनले गरेको भेटघाट विवादास्पद रह्यो। यसै समयमा भारतीय केहि मिडियाहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आपत्तिजनक…
काठमाडौं, २५ असार । नेकपा अध्यक्षद्वयबीच चार दिनयता जारी छलफल बुधबार आएर झनै बिग्रिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच अब बिहीबार छलफल हुन्छ/हुन्न भन्ने टुंगो पनि छैन। आइतबार आरोप/प्रत्यारोप चल्यो।…
काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषीको भविष्यवाणीको प्रसंग फेरि कोट्याएका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाले यसबारे बिफ्रिङ गरेको श्रोतले…
काठमाडौं, २२ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि ‘थ्रेट’ बढेको भन्दै सुरक्षा निकायले सतर्कता अपनाएका छन्। यो परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले सूक्ष्म सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गरेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र…
काठमाडौं /प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पछिल्लो समय देखिएको विवादलाई लिएर बिहीबार साँझ सरकारी निवास बालुवाटारमा युवा, विद्यार्थीसँग छलफल गरेका छन्। पाटन दरबार परिसरमा अनसनमा बसेर बिरामी परेपछि…
काठमाडौं, १८ असार । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुबीच विग्रिएको सम्बन्धकाबीच विहिवार नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई भेटेका छन् उनले त्यस अघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भेटेका थिए । प्रधानमन्त्री…
ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि सुवास नेम्वाङलाई अघि सारेपछि प्रचण्ड–नेपाल तनाबमा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध पार्टीभित्रै घेराबन्दी सुरु भएपछि नेकपा फुटको संघारमा पुगेको छ। नेताहरु प्रचण्ड, माधब नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेब गौतम प्रधानमन्त्री ओलीलाई जारी स्थायी समिति बैठकमा पार्टी र…
काठमाडौं। नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परामर्शमा व्यस्त भएका छन् । पार्टीभित्रै राजीनामा माग भएपछि तनावमा रहेका प्रधानमन्त्री बुधबार बिहानैदेखि आफ्ना निटकका मन्त्री र सांसदहरुसँग छलफलमा जुटेका हुन् । मंगलबार नेकपा स्थायी…
गगनको आ’क्रोश, पाँचवटा पिसीआर मेसिन र २५ हजार किट किनेर १० अर्ब खर्च देखाउने ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका नाममा सरकारले चरम लापरबाही गरेको भन्दै आ’क्रोश व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनेवित्तिकै समय लिएर बोल्दै थापाले कोरोना संक्रमणमा सरकारको…
यो वर्ष त देशमा चमत्कार नै हुने रहेछ !
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद गगनकुमार थापाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएपछि यो वर्ष देशमा चमत्कार नै हुने भन्दै सरकारमाथि व्यंग्य गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै थापाले देशमा कुनै समस्या…